Alahady – 05/10/2014 – Toriteny – Ecar Sainte Anne Anjomakely
Dia misaotra anareo ankizy ao amin’ny Fraternité Ambohipiadanana noho ny nanehoana an-tsehatra ny tantara voalaza tao amin’ny Evanjely. Sambasamba ho antsika angamba ny nahita zavatra tahaka ireny hatramin’izay, ka izany no ilàna ny fikarohana lalandava.
Eo amin’ny zavatra hafa isika mahay mikaroka, fa adinontsika fa eo amin’ny fiderana an’Andriamanitra ihany koa dia tena ilaintsika ny mikaroka ahavelona ny zavatra tokony hampitaina. Dia nazava angamba ny tantara satria hitantsika fa efa nianatra « Théatre » ireo ankizy ireo. Ianareo izay efa nahita ny fampisehoana efa nataon’izy ireo dia tsy gaga intsony, ary mbola hanao zavatra tsara ts fahitantsika izy ireo anio ka ho hitanareo eo amin’ny folak’andro ny zavatra tsy fahita hasehon’izy ireo.
« TANIMBOALOBOK’ANDRIAMANITRA ISIKA »
Io no foto-kevitra anentanan’ny fiangonana antsika amin’ity andro anio ity. Dia hiainga amin’ny Evanjely ny fampianarana ho antsika amin’izany. Jesoa miresaka amin’ny lohandohann’y mpisorona sy ny loholona, ho tohin’izay efa noresahantsika tamin’ny herin’ny androany. Ireo no mpisorona, ireo no mpitondra fivavahana tamin’izany andro izany ary notsongoin’olom-bolo. Ireo no nametrahan’Andriamanitra andraikitra amin’ny fitantanana ny fiainam-panahin’ny olona tamin’izany. Dia miteny amin’ireo Jesoa manao an’ity fanoharana ity: lehilahy tompon-trano iray namboly voaloboka ary namefy azy manodidina. Hitantsika eto hoe inona no nataon’ny tompon’ny tanim-boaloboka. Dia iza izany no tompon’ny tanim-boaloboka? Ny tompony dia Andriamanitra. Raha ny fanoharana no raisintsika, inona no nataon’ny tompon’ny tany anehoany ny fitiavany sy ny fikarakarany azy? Hitantsika tamin’ny fihetsika nataon’ny ankizy teo fa namefy azy manodidina izy, nandavaka tany hanaovana famihazana teo, ary nanao tilikambo. Ireo no zavatra natao tamin’ny tanim-boaloboka.
Henontsika tamin’ny vakiteny voalohany teo tao amin’ny bokin’Izaia mpaminany hoe: “Inona no tsy efa nataoko taminao ry Israely?”.
Dia voalaza teo fa nanorina tilikambo teo afovoany izy, nanao famihazana ary anano ny fefy. Izay no natao arakany voalazan’Izaia mpaminany. Israely no tanim-boalobok’Andriamanitra. Nikarakara sy nandany fotoana izy ary andany vola aman-karena ny tompon’ny tanim-boaloboka. Ka tsy misy hafa amin’izay no nataon’Andriamanitra. Rehefa vitany izay dia nahofany tamin’ny mpiasa ilay tany ka lasa izy nandeha. Izay ireo mpiasa ireo?
Iroe mpiasa dia tsy iza fa ireo lohandohan’ny mpisorona sy loholona tamin’izay andro izany. Ireo no tenenin’I Jesoa. Ireo no ambaran’ny fanoharana: nahofany tamin’ny mpiasa dia lasa izy nandeha lavitra. Ity fihetsika ity dia maneho an’Andriamanitra izay tsy eo. Ahofany tamin’ny mpiasa ny taniny, misy fotoana eo amin’ny fiainantsika ary tsapantsika fa tsy eo Andriamanitra. Tsy hita Izy.
Fany hevitr’Andriamanitra amin’io dia izao: manome fahafahana ho antsika olombelona Andriamanitra amin’ny fotoana maha-tsy eo Azy.
Fa inona amin’izay ary? Tonga ny fotoam-pahavokarana dia mandefa ankizilahy izy haka ny vokatry ny tany. Dia tsy iza io olona irahana ireo fa ireo mpaminanay tamin’izany andro izany. Irahin’Andriamanitra ny mpaminany ho eo amin’ny vahoaka, fa inona no nataon’ny olona rehefa tonga ireo mpaminany? Ny sasany nosamborina, ny sasany novonoina dia nariana tany ivelan’ny tanàna. Io no ataon’Andriamanitra: maniraka olona hampatsiaro ny fanekem-pihavanana. Tsy vitan’izay ihany, rehefa hitan’ny tompon’ny tanim-boaloboka fa tsy niverina ireo ankizilahy nirahiny dia naniraka maromaro indray izy avy eo. Fa mbola izay fihetsika izay ihany no nataon’ny olona. Ahitantsika ny hoe inona no tsy efa nataon’Andriamanitra hanehoana fitiavan an’io tanim-boaloboka io. Nalefa ny andiany voalohany fa novonoina, dia mbola tahaka izay koa ny andiany faharoa.
Farany, ny zanany lahitokana no nirahiny fa hoy izy hoe “hanaja ny zanako ireo”. Dia raha isika aza no eo amin’ny toeran’ny tompon’ny tanim-boaloboka, dia hanome tsiny isika: ny zanako izao ve no hirahiko kanefa olona efa firy no nirahiko tany, dia ahoana no mbola handefasana ny zanaka ihany? Kanefa dia ny zanany lahitokana no nirahiny. Izay ilay zanaka lahitokana? I Jesoa Kristy izany zanaka izany. Io no hany lahitokan’Andriamanitra nalefany tety ambonin’ny tany. Fa inona no nataon’ny olona? Ity ny mpandova, andeha hovonointsika izy dia ho lasantsika ny tanim-boaloboka. Dia inona ny fihetsika nataon’ireo mpiasa raha tsaroanareo tsara? Raha nahita an’ilay zanaka lahitokana mpandova izy ireo dia nosamboriny io ary nentiny tany ivelan’ny tanim-boaloboka ary tany no novonoina.
Dia gaga isika fa maninona ny olona teo aloha rehetra novonoina tao anatin’ny tanim-boaloboka fa ity zanaka lahitokana no nentina tany ivelan’ny tanàna vao novonoina. Misy dikany io raha arak any lalàna.
Raha jerentsika ao amin’ny Bokin’ny Levitika toka faha-24, and 14 sy 16 dia izao no fanao, voalazan’ny lalàna io: olon-dratsy dia tsy maintsy any ivelan’ny tanàna no vonoina. Dia tahaka izay koa hitantsika Md Etienne ao amin’ny Asan’ny Apostoly toko fahafito, nentina tany ivelan’ny tanàna notoraham-bato ho faty. Dia ny anankiray, Jesoa Kristy hitantsika ao amin’I Md Lioka ny filazana fa any ivelan’ny tanàna no famonoana ny olona, ka Jesoa rehefa hovonoina dia nentina tany ivelan’ny tanàna ka tany amin’ny tampon’ny Kalvery no namonoana azy. Izay no voalazan’ny lalàna: ny olon-dratsy dia any ivelan’ny tanàna no vonoina.
Ka ity filazana amin’ny fanoharana amin’ny tanim-boaloboka ity dia milaza sahady an’I Jesoa hovonoina. Inona no hevitr’izany rehetra izany?
Ny tompon’ny tanim-boaloboka dia tsy iza fa Andriamanitra, fatra-pitia ny olombelona, ary nanao izay azony atao hikarakarana antsika olombelona. Tsy misy tsy nataon’Andriamanitra ho antsika olombelona hanehoana fitiavana.Dia io moa ilay antsoantson’I Md François d’Assise : “L’amour n’est pas aimer” – “Tsy fitia ilay fitiavana”. Ilay fitiavan’Andriamanitra toa tsy ahoan’ilay olona, toa tahaka ny matimaty foana Andriamanitra. Andinihantsika tena io amin’izao andro alahady izao. Fanoharana ny tanim-boaloboka izay ahitantsika fa nanao izay aony atao rehetra Andriamanitra. Nomeny andraikitra ny olombelona, mila antsika Izy satria tsy afaka hanao ny asa rehetra Andriamanitra. Nomena andriakitra ny olombelona hitantana ary inona ny hadisoana be vava nataon’ny mpiasan’ny tanim-boaloboka?
Tsy vitan’ny hoe tsy nanome ny vokatry ny tany fotsiny izy fa novonoiny ny tompony, noheveriny ho azy io tany io. Izay ny hadisoana be vava nataon’ireto mpiasan’ny tanim-boaloboka. Ankoatra ny hoe namono ny ankizilahy sy ny zanaky ny tompon’ny tanim-boaloboka izy, tsy nanome ny vokatra ara-dalana sy araky ny nifanaraha izy, ary ny iray indrindra indrindra, ary io no tena zava-doza dia ny nihevitra hoe azy ny tany, nihevitra fa izy ireo no tompon’ny tanim-boaloboka.
Eo amin’ny fiainantsika, dia mety misy fitrangan-javatra tahaka an’io. Ataontsika any ivelany Andriamanitra, tsy avelantsika hiditra eo amin’ny fiainantsika Izy tahaka ny nataon’ny mpiasa ny tanim-boaloboka. Misy fiainana omena antsika isan’andro ka ataontsika any ivelany Andriamanitra. Tsy avelantsika hiditra eo amin’ny fiainantsika Izy. Diniho anie ny fiaintsika andavanandro eh!!! Toa minia mikipy isika. Inona no mahatonga ny olona manao ratsy? Inona no mahatonga ny olona mangalatra, manao ny tsy fahamarinana?Satria manao an’Andriamanitra ho tsy misy. Manilika an’Andriamanitra, hany ka manaotao foana ny olombelona.
Dia amaranan’I Jesoa ilay fanoharana teo: ny vato narian’ny mpanao ny orin-trano, io ilay Jesoa navoaka tany ivelany, nariana tany ivelany sy novonoina tahaka ny vato nariana, no indro tonga vato fehizoro.
Noho I Kristy maty novonoina fa nitsangan-ko velona dia takaha izao isika mianakavy. Raha tsy maty I Kristy ka nitsnangan-ko velona, dia tsy nisy izany finoana kristianina izany, tsy nisy akory ity fiangonana ity. No indro tonga vato fehizoro; ka mahagaga eo imasontsika ve?
Dia mandinika ary isika mianakavy hoe inona eo amin’ny fiaintsika no nanilihantsika an’Andriamanitra? Ary tenin’I Jesoa teo: “Ataony ahoana moa izany mpiasa ratsy fanahy izany? Rehefa tonga izy, ary tsy maintsy ho avy ny fotoan’ny fitsarana ka alàny amin’ireo ny tanim-boaloboka ary homeny ny hafa izay hampahavokatra azy”. Ary ireo mpiasa izay tsy mahavokatra azy ireto dia hokapohina ary hovonoina.
Milaza amintsika izany fa misy farany ny zavatra rehetra. Tsy misy mpanao ratsy izany ka ho afa-maina amin’ity tany ity. Ary tsy misy olona niezaka nanao ny marina ka ho very mandrakizay.
Mazava ny tenin’I Jesoa tamin’ny fanoharana fa ho alàna ireo, ho alàna amin’ireo mpiasa ratsy fanahy ireo ny tanim-boaloboka ka omeny olon-kafa.
Koa mahaiza isika manararaotra ny fahasoavana omen’Andriamanitra antsika isan’andro. Tsy hanao tahaka ireo mpiasan’ny tanim-boaloboka ireto, mihevitra fa azy ny zavatra rehetra ka tsy hamerina amin’Andriamanitra izay irin’Andriamanitra. Isika dia antenain’Andriamanitra hanome vokatra, misy zavatra andrasan’Andriamanitra amintsika tsirairay avy isan’andro ka aoka isika hiezaka hanome vokatra an’Andriamanitra ary hoezahantsika, farafaharatsiny ahay ny hiaina ny fahamarinana. Fa isika dia natao mpitantana fotsiny ihany fa tsy tompony.
Alahady 19/07/2015 : Toriteny